ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းရဲ့ အငွေ့အသက်တွေနဲ့ လွမ်းမောဆွတ်ပျံ့ဖွယ်အကောင်းဆုံး "House of Memories"
ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းရဲ့ အငွေ့အသက်တွေနဲ့ လွမ်းမောဆွတ်ပျံ့ဖွယ်အကောင်းဆုံး “House of Memories”
19 Mar 2018 . 6:16 PM
အခရာကို အားပေးနေကြ အစားသမားလေးတို့အတွက် ဒီနေ့ အခရာက ထူးထူးဆန်းဆန်း ဆိုင်လေးတစ်ဆိုင်ကို ခေါ်သွားဖို့ စီစဉ်ထားပါတယ်။ ဆိုင်လေးက ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းရဲ့ လွမ်းမောတမ်းတဖွယ် အငွေ့အသက်တွေ အပြည့်နဲ့ ရန်ကုန်မြို့ရဲ့ ဆိတ်ငြိမ်လမ်းလေးထဲမှာ ၁၂နှစ်ကျော် ခမ်းခမ်းနားနားတည်ရှိနေတဲ့ စားသောက်ဆိုင်ပါ။
၁၂ နှစ်ကျော်တောင်ရှိပြီဆိုတော့ ရောက်ဖူးသိဖူးတဲ့သူတွေလည်း ရှိနေမှာဆိုပေမယ့် မသိသေးတဲ့သူတွေအတွက် အဲ့ဆိုင်လေးကို တခါတခေါက်ရောက်ပြီး အတိတ်အငွေ့အသက်တွေထဲ ပြန်မျောချင်ကြမလားလို့ အခရာသူအခရာသားတို့ ဒီပိတ်ရက်လေးမှာ သွားမျောခဲ့ ခံစားခဲ့တဲ့ အတွေ့ကြုံလေးတွေ အချိန်နဲ့အညီ သတင်းပို့လိုက်ပြီနော်။
၁၂ နှစ်ကျော်တောင်ရှိပြီဆိုတော့ ဆိုင်ကြီးက အိုနေ၊ ဟောင်းနေ၊ ဒိတ်အောက်နေမှာပဲလို့ ထင်သွားပြီမလား? ဒီဆိုင်ကတော့ အိုနေ၊ဟောင်းနေတာထက်ကို ဂန္ဓဝင်ဆန်လွန်း၊ ခံ့ညားလွန်းနေတာကို ဆိုင်ပြင်ပပုံစံကြည့်တာနဲ့တင် ဝိုးလို့ အံ့အားသင့်သွားမှာ သေချာပါတယ်။ ကိုယ့်ကိုကိုယ် ကိုလိုနီခေတ် ခနလေးရောက်သွားသလို Feeling မျိုးကို ဒီဆိုင်မှာမှ ခံစားရမှာနော်။ ဦးဝိစာရလမ်းမပေါ် Yangon Auto Carwash and Spa ရဲ့ဘေးကပ်ရက် လမ်းသွယ်လေးထဲ ဝင်လိုက်တာနဲ့ ထီးထီးကြီးနဲ့ ခမ်းခမ်းနားနားရှိနေတဲ့ အိမ်ပုံစံ အသွင်ပြင်နဲ့ House Of Memories Restaurant ကို တွေ့ရမှာပါ။
ဒီနေရာမှာ သူ့ဆိုင်ရဲ့ သမိုင်းလေးကို အရင်ရှင်းပြပေးရရင် ၁၂ နှစ်ဝန်းကျင်ဖွင့်ခဲ့တဲ့ဒီဆိုင်ဟာ မဖွင့်ခင်အချိန်အတော်ကြာ အိမ်ကြီးအိမ်ကောင်းတစ်ခုအနေနဲ့ ရပ်တည်ခဲ့တာပါ။ ၁၉၄၅ နဲ့ ၁၉၄၇ မှာလည်း ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းကိုယ်တိုင်ရုံးထိုင်ခဲ့တာဆိုတော့ ဗိုလ်ချုပ်မကွယ်လွန်ခင်အချိန်တွေ၊ ဗိုလ်ချုပ်သုံးခဲ့တဲ့လက်နှိပ်စက်၊ စာရွက်သိမ်းတဲ့သေတ္တာတွေနဲ့ ဗိုလ်ချုပ်အထိမ်းအမှတ်ပုံတွေကို အဲ့ဗိုလ်ချုပ်ရုံးထိုင်ခဲ့တဲ့ အခန်းလေးထဲမှာပဲ ပြတိုက်အသေးစားလေးပုံစံ လေ့လာလို့ရအောင်ပြထားပေးပါတယ်။
နောက်ထပ် အိန္ဒိယသံအမတ်မိသားစုတွေလည်းနေခဲ့တာမို့ ခု အိမ်ကို ဆိုင်အသွင်ပြောင်းလိုက်တဲ့အခါ အခန်းတွေကို အခန်းအလိုက် အိန္ဒိယနာမည်တွေပေးထားတာပါတဲ့။ ဆိုင်လေးက တကယ့်ကို စိတ်ဝင်စားစရာ အငွေ့အသက်တွေ၊ လေ့လာစရာတွေ အပြည့်ပါပဲ။ ခုနောက်ပိုင်း ပိုင်ရှင်တွေလည်း အချိန်တစ်ခုထိ နေခဲ့ကြပေမယ့် နောက်ပိုင်း Restaurant ပုံစံလေးနဲ့ အမှတ်တရလေ့လာလို့ရအောင် ခင်းကျင်းပြသချင်တာမို့ ဒီလို Idea လေးရခဲ့တာလို့ပြောပါတယ်။
ဆိုင်ကိုရောက်ပြီဆိုတာနဲ့ ဆိုင်ထဲမဝင်သေးဘဲ အပြင်တပတ်အရင်ပတ်ကြည့်ရအောင်။ ခြံဝန်းလေးထဲမှာ တည်ဆောက်ထားတာမို့ ခြံရဲ့ ဘယ်ဘက်ထောင့်မှာ ဆင်ဝင်နဲ့ သီးသန့် ဝိုင်းလေးတွေ၊ စိမ်းစိုနေတဲ့ မျက်ခင်းပေါ်မှာ Event တွေအတွက် ခုံတန်းရှည်လေးတွေနဲ့ ခင်းကျင်းထားတာလေးတွေ့ရတယ်။
ဆိုင်ကတော့ ၂ထပ်ရှိပြီး အတွင်းဘက်အနေအထားကတော့ မီးရောင်မှိန်ပျပျနဲ့ မှောင်မှိန်းမှိန်းလေးပါ။ အောက်ထပ်မှာ သီးသန့်ခန်းတစ်ခန်း၊စားပွဲရှည်တွေ၊ စန္ဒယားခုံတွေ၊ ဓါတ်ပုံတွေ၊ ဘားကောင်တာနဲ့ တကယ့်ကို ဂန္ဓဝင်ဆန်ပါတယ်။ အပေါ်ထပ်ကတော့ သီးသန့်တွေ့ဆုံပွဲတွေအတွက် ပိုကိုက်ညီပြီး Private ခန်းတွေလည်း ၂ ခန်းထပ်ရှိပါသေးတယ်။ ဗိုလ်ချုပ်အငွေ့သက်တွေနဲ့ ရုံးခန်းလေးလည်းရှိပါတယ်။
နေရာအပြင်ဆင်တစ်ခုလုံးက တကယ့်ဂန္ဓဝင် Classic ပုံစံပါ။ သူ့ဆိုင်မှာ သောကြာ၊ စနေ၊ တနင်္ဂနွေတွေမှာလည်း Piano Unplugged Live လေးရှိတာမို့ ညဘက်ထိုင်လို့လည်းကောင်းမယ့်နေရာမျိုးပါ။ အစားအသောက်အနေနဲ့ဆိုရော? ထင်ထားသလောက်ကောင်းပါ့မလားလို့ မီနူးတောင်းကြည့်လိုက်တော့ မီနူးစာရွက်နဲ့တင် ကြွေသွားတယ်ပေါ့နော်။ နိုင်ငံခြားသတင်းစာပုံစံဖန်တီးထားတဲ့မီနူးက မှာတဲ့ဝိုင်းတိုင်းအတွက် Free ပေးတာပါတဲ့။ စားသောက်စရာအများစုက နိုင်ငံခြားသား Taste အတိုင်းဆိုတော့ ကိုယ်တွေမြန်မာလျှာနဲ့ကိုက်ပါ့မလားဆိုရင်တော့မှားသွားမယ်။ ဈေးကတော့ ကြီးပါတယ်။
ဝက်သားတုံးခပ်ကြီးကြီးတွေကို သရက်သီးချိုချဉ်သနပ်လေးနဲ့ အနှစ်နိုင်နိုင်လေးချက်ထားတာများ နူးအိပြီး အနှစ်ပါပြောင်အောင်စားခဲ့မိတဲ့အထိကို ကောင်းပါတယ်။ တစ်ပွဲကိုအသားများများပါတာကိုမှ ၉၀၀၀ ကျပ်ပါ။ ဒီဆိုင်ရဲ့ လူကြိုက်အများဆုံးပါ။
သူလည်းအမှာအများဆုံးထဲ ပါပါတယ်။ မြန်မာအရသာလေးပဲ သုပ်ထားတာ။ ဆိမ့်ဆိမ့်လေးပါ။ ကိုယ်ကတော့ ခရမ်းသီးသမားမဟုတ်တော့ သိပ်မစားတတ်။
အမဲသားကို မွှေးနေအောင် မာဆတ်ဆတ်လေးကင်ထားပြီး ချယ်ရီခရမ်းချဉ်သီးလေးနဲ့ ခင်းကျင်းပေးထားတာပါ။ တကယ်မွှေးပြီးကောင်းတာပါ။ ဆော့စ်ကို အမှတ်ပြည့်ပေးပါတယ်။
တခြား တုန်ယမ်း၊ အစိမ်းကြော် လေးတွေလည်း မြန်မာအရသာပါပဲ။ တစ်ခုသတိထားမိတာက ပမာဏများပါတယ်။ တွဲစားဖို့ ထမင်းဆို အုန်းထမင်း၊ ပဲထမင်း၊ ခရမ်းချဉ်ထမင်းလေးတွေလည်း ရပါတယ်။ အချိုပွဲအနေနဲ့ မြန်မာမုန့်တော်တော်များများနဲ့ မုန့်လုံးရေပေါ်အထိရပါတယ်၊
သောက်စရာအနေနဲ့ဆို House Of Memories ရဲ့ မူပိုင် ကော့တေးလ် လေးကို အကြံပြုပါတယ်။ ချဉ်စူးစူးရှိန်းရှိန်းလေးနဲ့ မိုက်ပါတယ်။ သူ့ဆီမှာ ရာသီပေါ် စိန်တလုံးသရက်သီးဖျော်ရည်လေးလည်းရှိပါတယ်။ အရသာအတွက် ခြုံပြောရရင် ဈေးကြီးပေမယ့် မြန်မာအရသာမျိုး ခံစားရပါတယ်။ စားမြိန်ပါတယ်။ ကော်ဖီနဲ့ တခြားသောက်စရာတွေတော့ ဈေးပုံမှန်လေးပဲ ပေးရပါတယ်။
House of Memories ဆိုတဲ့အတိုင်း ဓါတ်ပုံတွေ၊ အမှတ်တရတွေ၊ အငွေ့အသက်တွေနဲ့ပြည့်နေတဲ့နေရာပါ။ညဘက်ထိထိုင်လို့ မျောလို့ကောင်းတဲ့နေရာပါ။ ရှေးခေတ်လက်ရာတွေ၊ လူနေမှုပုံစံတွေ၊ အနောက်တိုင်းအပြင်အဆင်တွေနဲ့ လေ့လာစရာတွေများတဲ့နေရာပါ။ မြန်မာလူမျိုးတစ်ယောက်အနေနဲ့ ဗိုလ်ချုပ်ရုံးထိုင်ရာအခန်းလေးတော့ လေ့ကိုလေ့လာသင့်တဲ့ နေရာပါ။
ကိုယ်ဆို အဲ့ကနေပြန်တဲ့အထိ အမျိုးအမည်မသိတဲ့ ခံစားချက်တစ်ခုနဲ့ စီးမျောခံစားလာမိတာ အိမ်အပြန်တလျှောက်ပဲမို့ ချစ်တဲ့ အခရာရဲ့ အစားသမားလေးတွေအတွက် ညနေညခင်းအပန်းဖြေရာ လေ့လာစရာ စိတ်ဝင်စားစရာတွေအပြည့်နဲ့ ရန်ကုန်မြို့ရဲ့ တစ်ခုတည်းသော အမှတ်တရစားသောက်ဆိုင်ပါလို့ အကြံပြုလိုက်ပါရစေရှင်။
ဗိုလျခြုပျအောငျဆနျးရဲ့ အငှအေ့သကျတှနေဲ့ လှမျးမောဆှတျပြံ့ဖှယျအကောငျးဆုံး “House of Memories”
အခရာကို အားပေးနကွေ အစားသမားလေးတို့အတှကျ ဒီနေ့ အခရာက ထူးထူးဆနျးဆနျး ဆိုငျလေးတဈဆိုငျကို ချေါသှားဖို့ စီစဉျထားပါတယျ။ ဆိုငျလေးက ဗိုလျခြုပျအောငျဆနျးရဲ့ လှမျးမောတမျးတဖှယျ အငှအေ့သကျတှေ အပွညျ့နဲ့ ရနျကုနျမွို့ရဲ့ ဆိတျငွိမျလမျးလေးထဲမှာ ၁၂နှဈကြျော ခမျးခမျးနားနားတညျရှိနတေဲ့ စားသောကျဆိုငျပါ။
၁၂ နှဈကြျောတောငျရှိပွီဆိုတော့ ရောကျဖူးသိဖူးတဲ့သူတှလေညျး ရှိနမှောဆိုပမေယျ့ မသိသေးတဲ့သူတှအေတှကျ အဲ့ဆိုငျလေးကို တခါတခေါကျရောကျပွီး အတိတျအငှအေ့သကျတှထေဲ ပွနျမြောခငျြကွမလားလို့ အခရာသူအခရာသားတို့ ဒီပိတျရကျလေးမှာ သှားမြောခဲ့ ခံစားခဲ့တဲ့ အတှကွေုံ့လေးတှေ အခြိနျနဲ့အညီ သတငျးပို့လိုကျပွီနျော။
၁၂ နှဈကြျောတောငျရှိပွီဆိုတော့ ဆိုငျကွီးက အိုနေ၊ ဟောငျးနေ၊ ဒိတျအောကျနမှောပဲလို့ ထငျသှားပွီမလား? ဒီဆိုငျကတော့ အိုနေ၊ဟောငျးနတောထကျကို ဂန်ဓဝငျဆနျလှနျး၊ ခံ့ညားလှနျးနတောကို ဆိုငျပွငျပပုံစံကွညျ့တာနဲ့တငျ ဝိုးလို့ အံ့အားသငျ့သှားမှာ သခြောပါတယျ။ ကိုယျ့ကိုကိုယျ ကိုလိုနီခတျေ ခနလေးရောကျသှားသလို Feeling မြိုးကို ဒီဆိုငျမှာမှ ခံစားရမှာနျော။ ဦးဝိစာရလမျးမပျေါ Yangon Auto Carwash and Spa ရဲ့ဘေးကပျရကျ လမျးသှယျလေးထဲ ဝငျလိုကျတာနဲ့ ထီးထီးကွီးနဲ့ ခမျးခမျးနားနားရှိနတေဲ့ အိမျပုံစံ အသှငျပွငျနဲ့ House Of Memories Restaurant ကို တှရေ့မှာပါ။
ဒီနရောမှာ သူ့ဆိုငျရဲ့ သမိုငျးလေးကို အရငျရှငျးပွပေးရရငျ ၁၂ နှဈဝနျးကငျြဖှငျ့ခဲ့တဲ့ဒီဆိုငျဟာ မဖှငျ့ခငျအခြိနျအတျောကွာ အိမျကွီးအိမျကောငျးတဈခုအနနေဲ့ ရပျတညျခဲ့တာပါ။ ၁၉၄၅ နဲ့ ၁၉၄၇ မှာလညျး ဗိုလျခြုပျအောငျဆနျးကိုယျတိုငျရုံးထိုငျခဲ့တာဆိုတော့ ဗိုလျခြုပျမကှယျလှနျခငျအခြိနျတှေ၊ ဗိုလျခြုပျသုံးခဲ့တဲ့လကျနှိပျစကျ၊ စာရှကျသိမျးတဲ့သတ်ေတာတှနေဲ့ ဗိုလျခြုပျအထိမျးအမှတျပုံတှကေို အဲ့ဗိုလျခြုပျရုံးထိုငျခဲ့တဲ့ အခနျးလေးထဲမှာပဲ ပွတိုကျအသေးစားလေးပုံစံ လလေ့ာလို့ရအောငျပွထားပေးပါတယျ။
နောကျထပျ အိန်ဒိယသံအမတျမိသားစုတှလေညျးနခေဲ့တာမို့ ခု အိမျကို ဆိုငျအသှငျပွောငျးလိုကျတဲ့အခါ အခနျးတှကေို အခနျးအလိုကျ အိန်ဒိယနာမညျတှပေေးထားတာပါတဲ့။ ဆိုငျလေးက တကယျ့ကို စိတျဝငျစားစရာ အငှအေ့သကျတှေ၊ လလေ့ာစရာတှေ အပွညျ့ပါပဲ။ ခုနောကျပိုငျး ပိုငျရှငျတှလေညျး အခြိနျတဈခုထိ နခေဲ့ကွပမေယျ့ နောကျပိုငျး Restaurant ပုံစံလေးနဲ့ အမှတျတရလလေ့ာလို့ရအောငျ ခငျးကငျြးပွသခငျြတာမို့ ဒီလို Idea လေးရခဲ့တာလို့ပွောပါတယျ။
ဆိုငျကိုရောကျပွီဆိုတာနဲ့ ဆိုငျထဲမဝငျသေးဘဲ အပွငျတပတျအရငျပတျကွညျ့ရအောငျ။ ခွံဝနျးလေးထဲမှာ တညျဆောကျထားတာမို့ ခွံရဲ့ ဘယျဘကျထောငျ့မှာ ဆငျဝငျနဲ့ သီးသနျ့ ဝိုငျးလေးတှေ၊ စိမျးစိုနတေဲ့ မကျြခငျးပျေါမှာ Event တှအေတှကျ ခုံတနျးရှညျလေးတှနေဲ့ ခငျးကငျြးထားတာလေးတှရေ့တယျ။
ဆိုငျကတော့ ၂ထပျရှိပွီး အတှငျးဘကျအနအေထားကတော့ မီးရောငျမှိနျပပြနြဲ့ မှောငျမှိနျးမှိနျးလေးပါ။ အောကျထပျမှာ သီးသနျ့ခနျးတဈခနျး၊စားပှဲရှညျတှေ၊ စန်ဒယားခုံတှေ၊ ဓါတျပုံတှေ၊ ဘားကောငျတာနဲ့ တကယျ့ကို ဂန်ဓဝငျဆနျပါတယျ။ အပျေါထပျကတော့ သီးသနျ့တှဆေုံ့ပှဲတှအေတှကျ ပိုကိုကျညီပွီး Private ခနျးတှလေညျး ၂ ခနျးထပျရှိပါသေးတယျ။ ဗိုလျခြုပျအငှသေ့ကျတှနေဲ့ ရုံးခနျးလေးလညျးရှိပါတယျ။
နရောအပွငျဆငျတဈခုလုံးက တကယျ့ဂန်ဓဝငျ Classic ပုံစံပါ။ သူ့ဆိုငျမှာ သောကွာ၊ စနေ၊ တနင်ျဂနှတှေမှောလညျး Piano Unplugged Live လေးရှိတာမို့ ညဘကျထိုငျလို့လညျးကောငျးမယျ့နရောမြိုးပါ။ အစားအသောကျအနနေဲ့ဆိုရော? ထငျထားသလောကျကောငျးပါ့မလားလို့ မီနူးတောငျးကွညျ့လိုကျတော့ မီနူးစာရှကျနဲ့တငျ ကွှသှေားတယျပေါ့နျော။ နိုငျငံခွားသတငျးစာပုံစံဖနျတီးထားတဲ့မီနူးက မှာတဲ့ဝိုငျးတိုငျးအတှကျ Free ပေးတာပါတဲ့။ စားသောကျစရာအမြားစုက နိုငျငံခွားသား Taste အတိုငျးဆိုတော့ ကိုယျတှမွေနျမာလြှာနဲ့ကိုကျပါ့မလားဆိုရငျတော့မှားသှားမယျ။ ဈေးကတော့ ကွီးပါတယျ။
ဝကျသားတုံးခပျကွီးကွီးတှကေို သရကျသီးခြိုခဉျြသနပျလေးနဲ့ အနှဈနိုငျနိုငျလေးခကျြထားတာမြား နူးအိပွီး အနှဈပါပွောငျအောငျစားခဲ့မိတဲ့အထိကို ကောငျးပါတယျ။ တဈပှဲကိုအသားမြားမြားပါတာကိုမှ ၉၀၀၀ ကပျြပါ။ ဒီဆိုငျရဲ့ လူကွိုကျအမြားဆုံးပါ။
သူလညျးအမှာအမြားဆုံးထဲ ပါပါတယျ။ မွနျမာအရသာလေးပဲ သုပျထားတာ။ ဆိမျ့ဆိမျ့လေးပါ။ ကိုယျကတော့ ခရမျးသီးသမားမဟုတျတော့ သိပျမစားတတျ။
အမဲသားကို မှေးနအေောငျ မာဆတျဆတျလေးကငျထားပွီး ခယျြရီခရမျးခဉျြသီးလေးနဲ့ ခငျးကငျြးပေးထားတာပါ။ တကယျမှေးပွီးကောငျးတာပါ။ ဆော့ဈကို အမှတျပွညျ့ပေးပါတယျ။
တခွား တုနျယမျး၊ အစိမျးကွျော လေးတှလေညျး မွနျမာအရသာပါပဲ။ တဈခုသတိထားမိတာက ပမာဏမြားပါတယျ။ တှဲစားဖို့ ထမငျးဆို အုနျးထမငျး၊ ပဲထမငျး၊ ခရမျးခဉျြထမငျးလေးတှလေညျး ရပါတယျ။ အခြိုပှဲအနနေဲ့ မွနျမာမုနျ့တျောတျောမြားမြားနဲ့ မုနျ့လုံးရပေျေါအထိရပါတယျ၊
သောကျစရာအနနေဲ့ဆို House Of Memories ရဲ့ မူပိုငျ ကော့တေးလျ လေးကို အကွံပွုပါတယျ။ ခဉျြစူးစူးရှိနျးရှိနျးလေးနဲ့ မိုကျပါတယျ။ သူ့ဆီမှာ ရာသီပျေါ စိနျတလုံးသရကျသီးဖြျောရညျလေးလညျးရှိပါတယျ။ အရသာအတှကျ ခွုံပွောရရငျ ဈေးကွီးပမေယျ့ မွနျမာအရသာမြိုး ခံစားရပါတယျ။ စားမွိနျပါတယျ။ ကျောဖီနဲ့ တခွားသောကျစရာတှတေော့ ဈေးပုံမှနျလေးပဲ ပေးရပါတယျ။
House of Memories ဆိုတဲ့အတိုငျး ဓါတျပုံတှေ၊ အမှတျတရတှေ၊ အငှအေ့သကျတှနေဲ့ပွညျ့နတေဲ့နရောပါ။ညဘကျထိထိုငျလို့ မြောလို့ကောငျးတဲ့နရောပါ။ ရှေးခတျေလကျရာတှေ၊ လူနမှေုပုံစံတှေ၊ အနောကျတိုငျးအပွငျအဆငျတှနေဲ့ လလေ့ာစရာတှမြေားတဲ့နရောပါ။ မွနျမာလူမြိုးတဈယောကျအနနေဲ့ ဗိုလျခြုပျရုံးထိုငျရာအခနျးလေးတော့ လကေို့လလေ့ာသငျ့တဲ့ နရောပါ။
ကိုယျဆို အဲ့ကနပွေနျတဲ့အထိ အမြိုးအမညျမသိတဲ့ ခံစားခကျြတဈခုနဲ့ စီးမြောခံစားလာမိတာ အိမျအပွနျတလြှောကျပဲမို့ ခဈြတဲ့ အခရာရဲ့ အစားသမားလေးတှအေတှကျ ညနညေခငျးအပနျးဖွရော လလေ့ာစရာ စိတျဝငျစားစရာတှအေပွညျ့နဲ့ ရနျကုနျမွို့ရဲ့ တဈခုတညျးသော အမှတျတရစားသောကျဆိုငျပါလို့ အကွံပွုလိုကျပါရစရှေငျ။